बिचारा ! बच्चालाई दूध खुवाउँदा महिला प्रहरीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न बा’ध्य पारियो – Namaste Host
April 24, 2021 April 24, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बिचारा ! बच्चालाई दूध खुवाउँदा महिला प्रहरीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न बा’ध्य पारियो
२१ महीनादेखि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा रहेकी बज्राचार्यले अब ललितपुरको कमाण्ड सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी पाएकी छन्।
७ कात्तिक आइतबारदेखि लागू हुने गरी आज प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव श्रोत एवं प्रशासन विभागले ३३ जनाको सरुवा गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यसअघि तीन जिल्ला भक्तपुरमा तारादेवी थापा, पर्सामा गंगा पन्त र सिन्धुलीमा रञ्जु सिग्देलले जिल्ला कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्।
ललितपुरमा एसएसपी बज्राचार्य गएसँगै जिल्ला कमाण्ड सम्हाल्ने महिलाको संख्या चार हुनेछ भने उपत्यकाका तीन मध्ये दुई जिल्लाको कमाण्डर महिला हुँदैछन्।
“ललितपुरको जिम्मेवारीमा संगठनले विश्वास गरेर पठाएको छ, त्यो विश्वास कायम राख्दै काम गर्नेछु”, उनले भनिन्, “ललितपुर विभिन्न जात, समुदाय र वर्गका मानिसको बसोबास भएको जिल्ला हो। सबैको आवाज सनुुवाइ गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेछु भन्ने लागेको छ।”
यसअघि उनले २०७२ साल असोजमा पहिलो पटक जिल्ला कमाण्डरको रुपमा भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा हुँदा संगठित रुपमा मानव बेचबिखन गर्ने ‘संगठित मानव तस्कर समूह’ लाई पक्राउ गर्न सफल भएकी थिइन्।
उक्त सफलतापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै ‘टीआईपी रिपोर्ट हिरो’ को रुपमा सन् २०१६ मा सम्मानित गरेको थियो।